KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Qorshaha Axmed Madoobe oo fashilmay? - Shirka Kismaayo oo marlabaad dib u dhacay
Friday 22 February 2013 20:52
Qorshaha Axmed Madoobe oo fashilmay? - Shirka Kismaayo oo marlabaad dib u dhacay
Kismaayo (KON) - Guddiga farsamada maamul u sameynta gobollada Jubbooyinka ayaa galabta ku dhawaaqay in uu dib u dhacay shirkii maamul u sameynta gobolladaas ee la filayay in uu maalinta berri ah ka furmo magaalada Kismaayo.
Sida Macallin Maxamed Ibraahim uu Warbaahinta u sheegay Shirka ayaa dib u dhacay kadib markii casuumaddii ka soo qeybgalka aysan ka soo jawaabin madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo qorshuhu ahaa in ay shirka furaan.
Sidoo kale Maamulka Gobolka Gedo ayaa dhawaan shaaciyay inay ka qeybgali doonin Shirka Kismaayo.
Guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in Shirkaasi aaney wax dan ah ugu Jirin Bulshada ku dhaqan Gobollada Jubbooyinka kaasi oo ay wataan Shaqsiyaad ay dowladda Kenya gadaal ka riixeyso isagoo uga digay in ay Joojiyaan Shirarka ay ka wadaan Magaalada Kismaayo ee Xaruna Gobolka Jubada Hooose.
Madaxda Dowlada ayaa ku qanacsanayn Nimanka Xukunka doonaya.
Sidee Keydmedia Online horay usoo qortay, Dowladda Soomaaliya ayaa iyadu horay u shaacisay in ay taageersantahay Maamul u sameynta Gobollada Jubbooyinka inkastoo ay ka soo horjeesteen Maleeshiyada Ururka Raaskaambooni ee Ku sugan Magaalada Kismaayo.
Qorshaha uu wado Axmed Max’ed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa loo arkaa Qorshe Lid ku ah Midnimada Soomaaliya iyo Xasiloonida Degaanka.
Mar kasta oo Kismaayo la soo qaado, dadka wixii wax garanaya waxay ereygooda u jiheeyaan dhinaca nabadda iyo wada-hadalka. Ficilkii ugu xumaa ee Kismaayo laga yiraahdo wuxuu ahaa kii ay ku fashilmeen Maleeshiyaadka meesha iska soo galay, oo markaas is lahaysiiyey.
Xildhibaan Codsaday in aan Magaciisa lasoo daabicin oo Wariyasha Keydmedia Online ee Kismaayo la hadlay ayaa yiri:
"Fishilka ugu weyni ee Kismaayo wuxuu salka ku hayey markii koox Maleeshiyo ah oo jifo kooban ah ay damac shisheeye iyagoo dugaashanaya ay si aan miyir lahayn u halacsadeen hunguri aan meeshaba oolin. Waxaa la is tusay oo si riyo ah la isaga dhaadhiciyey in Kismaayo meel kale laga maamulo oo aan Somali ahayn, sidaas ayaa loogu dhacay fadeexad ku aaddanayd in Masuuliyadda iyo jiritaankii Somalinimo wax kale laga door bido, oo nidaamka iyo qaranimada Somaliya la iska indha tiro (waa tii talada Madaxweynaha iyo tan dowladdaba la diiday)."
"Dadka Aragtida fog waa garanayeen in falkaas foosha xun ee ka soo yeeray Maleeshiyaadka uu wato Axmed Madoobe aysan yaba yaraatee wax wanaagsan dib uga soo yeeri doonin."
"Hase ahaatee, dowladda waxaa lagu maslaa hooyoo, hooyana ilmaheeda wanaagsan iyo kuweeda xunba waa ay wadataa. Arrinta la yaabka leh ee hadda soo ifbaxaysaa waa Faroole oo mar kale Kismaayo ku soo baraarugay. Allow bal ogow."